DEG DEG:- Qarax ka dhacey Dekeda muqdisho Agteeda – Beegsonews-Wararka maanta
Home WARARKA MAANTA DEG DEG:- Qarax ka dhacey Dekeda muqdisho Agteeda
DEG DEG:- Qarax ka dhacey Dekeda muqdisho Agteeda
Qarax ayaa gil gilay qeybo ka mid ah caasimada Soomaaliya saaka subixii hore iyadoo gaari waxyaabaha qarxa laga soo buuxiyay uu ku qarxay bar koontarool oo ku taala meel aan ka fogeyn dekada, goobjoogayaal ayaa sheegay, laakiin booliisku wax jawaab ah kama bixin khasaaraha ka dhashay.
Inta la xaqiijiyay Qarax saakay ka dhacay illinka hore ee laanta ilaalada canshuuraha oo kasoo horjeeddo Dekadda Muqdisho waxaa ku dhintay kaliya ninkii saarnaa gaariga qarxay, waxaa sidoo kale ku dhaawacmay 5 askari oo xarunta ilaalineysay.
Wararka qaar ayaa sheegaya in askarta ilaalisa goobta ay rasaas huwiyeen gaariga ka hor inta uusan qarixn, waxaana burbur soo gaaray darbiga xarunta.
Burbur bir ayaa nagu soo dhacay dhammaan gudaha dekada waxaan maqalnay rasaas, ”ayuu yiri shaqaale dekeda ah oo codsaday inaan magaciisa la shaacin sababo amni awgeed. “Ciidamada amniga ayaa hareereeyay aagga.”
Qaraxu wuxuu gilgiley dhulka, ayuu yiri Maxamed Cali, dukaan ku yaal aagga. Isbitaalka Madiina ee magaalada, kalkaaliso caafimaad, Xaliima Nuur, ayaa sheegtay inay ku dhasheen shan qof oo ku dhaawacmey qaraxa si loogu daweeyo.
Previous articleRaysal wasaare ABIY oo Sheegey in la rabey in dalka dagaal sokeeye ka bilowdo.
Next articleMasar ayaa sheegtay in aan wax horumar ah laga helin wadahadalkii wabiga Niil ee Itoobiya
cumar Filish oo ku baaqay in lala shaqeeyo laamaha ammaanka